Vaovao - Misy lafin-javatra maro manampy ny toetr'andro ISO New England amin'ny ririnina
Antsoy izahay: 0086-18731103336
Antony maromaro no manampy ny toetr'andro ISO New England amin'ny ririnina sarotra
Ny anton-javatra isam-paritra sy manerantany, miampy ny fanomanana sy ny hatsiaka mitondra hatsiaka, dia nanampy ny ISO New England tafavoaka tamin'ny ririnin'ny 2014-15 miaraka amin'ny olana vitsy an'isa sy ny vidiny tsy dia lafo loatra, hoy ny ISO ny zoma.
Tamin'ny tatitra nataon'ny Komitin'ny Mpandray anjara amin'ny New England Power Pool, Vamsi Chadalavada, filoha lefitra mpanatanteraka ao ISO New England, dia nanamarika fa ny vidin'ny marginal eo an-toerana eo an-toerana ISO dia 64,25 $ / MWh tamin'ny volana martsa, nidina 45,7% ny volana febroary ka hatramin'ny farany. 42,2% hatramin'ny martsa 2014.
Anisan'ny fanomanana izay nanampy ny ISO New England tamin'ity taona ity ny fandaharan'asa Fahatoky amin'ny Ririnina, araka ny tatitra, izay nanome valisoa an'ireo mpamokatra enta-mavesatra noho ny fitazomana ny fitehirizan-tsolika ampy na ny fifanarahana amin'ny famatsian-tsolika voajanahary liaka, hoy ny tatitra natolotra ny mpiray antoka.
Ny fahavoazan'ny LNG manerantany, ampiarahana amin'ny vidin'ny gazy voajanahary ao amin'ny faritra amin'ny ririnina 2013-14, dia niteraka LNG betsaka kokoa hita ao amin'ilay faritra.
Ary ny fihenan'ny vidin-tsolika izay nitranga hatramin'ny fahavaratra lasa izay dia nahatonga ny “taranaka solika matetika toekarena kokoa noho ny famokarana entona voajanahary… [noho izany] mampihena ny fihenan'ny vidin'ny lasantsy sy ny herinaratra,” hoy ny ISO.
Ny salan'isa vidin'ny gazy voajanahary any amin'ny faritr'i New England dia manodidina ny $ 7.50 / MMBtu tamin'ity volana martsa ity, raha oharina amin'ny $ 16,50 / MMBtu tamin'ny volana febreo, hoy ny ISO.
New England dia nanana volana Desambra somary malefaka, ary ny andro mafana indrindra dia nahemotra hatramin'ny volana febroary, "rehefa lava kokoa ny andro ary nihena ny fandaniana herinaratra," hoy ny ISO.
New England dia nanana mari-pahaizana momba ny hafanana 3% nanomboka ny volana Desambra ka hatramin'ny Febroary, raha oharina amin'ny vanim-potoana 2013-14, fa ny totalin'ny HDD an'ny Desambra dia 14% latsaka ny Desambra 2013, fa kosa ny totalin'ny HDD tamin'ny volana febily dia manodidina ny 22% noho ny volana feb. 2014.
Antony iray hafa amin'ny ririnin'ny ISO New England izay tsy dia misy fotony dia ny fahombiazan'ny angovo, manaratra ny fanjifana herinaratra tanteraka sy ny tampon'ny fangatahana, hoy ny ISO.
Ny ISO New England dia nandany teo amin'ny 10,9 Twh tamin'ny volana martsa, raha oharina tamin'ny 11 Twh tamin'ny volana febroary sy tamin'ny martsa 2014, araka ny tatitra.
Manampia: faritra indostrialy tangqiaotang zhang jiagang city china